Qubaannoo qaree ammaatti toorbarruu saaga. Kana booda, Naanna'aa yeroo boodaaf iddoo mallatteessameetti akka atattamaan utaaltuuf fayyadamuu nidandeessa. Galmee HTML keessatti, geessituu irraa gara toorbarruuwwan atti itti Korkoddiiwwanitti utaaluu dandeessuu dha.
Saagi - Toorbarruu filadhu
Toorbarruu gooreetti utaaluuf, F5 dhiibi Naanna'aabanuuf, mallattoo idaatii (+) galfata Toorbarruu itti aanee jiru cuqaasitii, kana booda, toorbarruucha irra lama-cuqaasi.
Maqaa toorbarruu uumuu barbaadduu barreessi. Tarreen gadii toorbarruu mara galmee ammaa keessatti of keessaa qaba. Toorbarruu haquuf, tarree keessaa filadhuutii, kana booda, Haqicuqaasi.
Maqaa toorbarruu keessatti arfiiwwan kanaan gadii fayyadamuu hindandeesu: / \_ @ : * ? " ; , . #
toorbarruu haquuf, qaaqa Toorbarruu Saagi toorbarruu filadhuutii, qabduu Haqi jedhu cuqaasi. Qaaqaan dhugoomsaa kanatti aanee bahu hinjiru.
Title is: Toorbarruu Saagi